Rajo Cusub Oo Laga Sheegay Dagaalka Lagula Jiro Coronavirus |
Waxaa si xowli ah ku socda daraasaad caafimaad oo lagu baadi goobayo tallaal lagula tacaalo cudurka laayaanka ah ee coronavirus, waxaana soo bidhaantay rajo yar oo caato ah.
Waxaa la bilaabay in la tijaabiyo tallaal horay loogu sameeyay cudurka ebola balse sidii la doonayey u shaqayn waayey, oo ah musharraxa ugu culus ee hadda u sharaxan la dagaalnaka iyo ka hortaga cudurka coronavirus, kaasoo iminka lagu tijaabinayo laba guruub oo ka mid ah bukaannada uu cudurkani soo ritey ee dalka Shiinaha oo ah isha cudurka corona.
Labbada koox ee lagu tijaabinayo ayaa kala ah bukaannada aadka u daran oo 10% iyo kuwa yara roon, ee dalka Shiinaha, waxaana la sugayaa natiijada ka soo baxda,l waxaana wareer ka taagan yahay nooca xanuunkan oo ah nabane, markaaba aan la arki kari calaamadihiisa.
Ilaa hadda waxaa ka bogsaday dad lagu qiyaasay 31000 kun oo qof oo ka mid ah ku dhawaad 90.000 oo uu asiibay xanuunkani, halka ay ladnaan dareemeen ku dhawaad 40.000 oo qof ayna u dhinteen ku dhawaad 3000 oo qof.
Xiisaha gaar ah ee uu cudurkani leeyahay ayaa ah qaabka loola dhaqamo qofka uu ku dhaco, iyadda oo qofka loo ogol yahay kaliya in uu waco telefoonka dhakkhtayra, mana booqan karo dhakhtarka, hadii loo baahdo oo uu caabuqu weeraro sanbabada kaliya ayuu helayaa adeeg caafimaad.